Kaongresy miaro ny tontolo IUCN: hetsika maharitra maharitra
Home » Lahatsoratra farany farany » tompon'andraikitra » Kaongresy miaro ny tontolo IUCN: hetsika maharitra maharitra
Vaovao Mafana Eoropeana • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovao farany Brezila • Vaovao • tompon'andraikitra • Tourism • malaza ankehitriny
Ny praiminisitra frantsay Macron niresaka tamin'ny fisokafan'ny Kongresin'ny IUCN
Ny Vondrona Iraisam-pirenena misahana ny fiarovana ny natiora (IUCN) dia nameno ny kongresy niaro ny tontolo iraisampirenena tamin'ity herinandro ity - herintaona taty aoriana noho izay nokasaina voalohany noho ny krizy COVID-19.
Fandaharam-potoana feno sy mamokatra ho an'ny zaikabe iraisam-pirenena momba ny fiarovana ny natiora 9 andro natao tao Marseille, France.
Nisy fihaonana an-tampony 4 nitranga nandritra io fotoana io, mikendry ny hanome aingam-panahy sy hanome hery.
Ny fihaonana an-tampony 4 dia: ny Vovonana Vovonan'ny Vazimba, ny Vovonan'ny Tanora manerantany, ny Vovonana Tale Jeneraly ary ny Vovonan'ny hetsika an-toerana.
Nandritra ny kaonferansa nandritra ny 9 andro, ny mpikambana IUCN dia nifidy tamin'ny Motions 39, voafidy fitarihana vaovao, ary nankatoavin'ny programa IUCN manaraka ho an'ny 2021-2024, izay hantsoina Natiora 2030: firaisana amin'ny hetsika. Nandritra io fotoana io ihany koa dia fihaonambe 4 no nisaraka - ny Fihaonana an-tampon'ny vazimba teratany, ny Vovonan'ny tanora manerantany, ny Fihaonana an-tampon'ny CEO, ary ny Vovonan'ny hetsika an-toerana, samy mikendry ny hanome aingam-panahy sy hanomezana hery ireo vondrona samihafa IUCN iarahany miasa.
Tonga tao amin'ny kaonferansa ny EcoGo manohana hetsika 3 - Motion 003 - Manangana komisiona miovaova amin'ny toetrandro (na manangana sehatra iraisam-pirenena momba ny krizy iUCN manerantany) avy amin'ny Hawai'i Conservation Alliance Foundation sy Our Drowning Voices; Motion 101 - Mametraka lasibatra momba ny fiarovana ny faritra miorina amin'ny porofon'ny zavatra ilain'ny natiora sy ny olona hiroborobo, tohanan'ny The WILD Foundation and Yellowstone to Yukon Conservation Initiative; ary ny Motion 130 - fanamafisana ny anjara asan'ny fizahantany maharitra amin'ny fiarovana ny zava-manan'aina sy ny faharetan'ny fiarahamonina, natolotry ny Vondron'ireo mpizahatany sy faritra voaaro an'ny WCPA (komisiona ao anatin'ny IUCN). Samy nandalo, araka ny fahitan'i ny valim-pifidianana.
Pamela ao amin'ny Aix en Provence
Ny Motion 130 dia manarona ny famoronana fizahan-tany maharitra ho lohahevitra sy fampidirana ireo hetsika fizahan-tany mifototra amin'ny natiora amin'ny kaonferansa ho avy sy ny IUCN amin'ny ho avy, miantso ny fananganana vondrona miasa eo amin'ny vaomiera mifantoka amin'ny anjara toeran'ny fizahan-tany maharitra amin'ny fiarovana ny zava-manan'aina sy ny faharetan'ny fiarahamonina ary manentana komisiona hafa hampiditra fizahan-tany maharitra amin'ny ezak'izy ireo amin'ny ho avy. Niarahaba ny WCPA sy ny mpiara-miasa rehetra amin'izany.
Motion 101 dia fotoana lava be nanamboarana azy, ary nandalo noho ny ezaka tsy misy fitsaharana nataon'i Vance Martin sy ny ekipany. Araka ny Ny fiovan'ny toetrandro dia mitaky ny filàna tanteraka amin'ny hetsika, ireo no karazana torolàlana ilaina hiarovana ny natiora - lakilen'ny fahavelomana.
Jehoshua Shapiro, Jessica Hughes, ary Pamela Lanier tamin'ny fisakafoanana CEC
Motion 003 dia niadian-kevitra be. Te hanana Vaomieran'ny Fiovan'ny toetrandro ireo mpirotsaka hofidina, saingy raha ny fanitsiana nataon'ny andrimpanjakana mpandinika IUCN dia novaina ho lasa task force fa tsy komisiona noforonina. Vakio ny valin'ny "Our Drowning Voices" momba izany fanovana izany Eto. Izany ny fiteny dia niova tamin'ny fanitsiana bebe kokoa ny "Fananganana sehatra iraisam-pirenena momba ny krizy iUCN manerantany" na fananganana komisiona. Ny volavolan-dalàna dia nolaniana tamin'ny adihevitra faha-8 sy farany tamin'ny latsa-bato natao tamin'ny kaonferansa, na dia mbola tsy fantatra aza izay endrika hotanterahiny.
IUCN koa nanaiky a manifesto vaovao mandritra ny efa-taona manaraka miaraka amin'ny fifantohana amin'ny fanarenana COVID-19 sy ny fampiatoana ny fahaverezan'ny biodiversité.